रामशरण महत अर्थमन्त्री हुदा ताका दिने भनिएको ५ करोडको हिसाब खोइ ?
सल्यानबाट चुनाव जित्नुभएका नेताद्द्य माननिय सभासद एवम ब्यबस्थापीका अर्थ समिती सभापती Prakash jwala ज्यु र माननिय सभासद एबम माओबादी केन्द्रका प्रमुख सचेतकTek Bahadur Basnet ज्युलाई एउटा सल्यानीको तर्फबाट केही जिज्ञासा + आग्रह !
तपाइँहरुलाई रामशरण महत अर्थमन्त्री हुदा ताका दिने भनिएको ५ करोड रकम सरकारले उपलब्ध गरायो कि नाइ ? उपलब्ध गराएको भए कति करोडको कामहरु आ-आफ्नो क्षेत्रमा सम्पन्न गराउनु भयो ? कति रकम खर्च भयो ? कति रकम बाकी छ ? कति योजना चलिरहेकै अबस्थामा छन ? कृपया यी सब विवरण सल्यानी जनताले बुझ्ने भासामा आफ्नो फेसवुकमा भए पनि राख्दिनु होला । हाम्रो जान्ने अधिकार हो र हामीलाई जान्न पनि मन छ ।
मैले तपाईंहरुले केही कामै गर्नु भएको छैन भन्न खोजेको पनि होइन । छ नि धेरै जसो गाउँ ठाउँमा बाटाघाटाहरु उक्त बजेटबाट योजनाहरु पारेर सम्पन्न गर्नु भएको कुरा हामीले तपाईंहरुकै फेसबुकबाट थाह पाईरहेका छौ । अब मैले माथी सोधेका प्रश्नहरुको जिज्ञासा पनि तपाईहरुकै फेसबुकबाट भए पनि जान्न पाए हुन्थ्यो ।